Barkinta Nylon oo leh adkeysi wanaagsan iyo sifooyin farsamo oo wanaagsan |
Barkinta Nylon oo leh adkeysi wanaagsan iyo sifooyin farsamo oo aad u fiican
Barkinta Nylon waxay leedahay adkaansho sare, iska caabin adag, foorarinta iska caabin, saameyn saameyn iyo kordhin sare. Awoodda isdabamarinta waxay la mid tahay tan birta, xooggeeda daalkuna wuxuu la siman yahay birta birta ah iyo aluminium. .
magaca sheyga:Nidaamka slider ee Mc nylon:Wax taaj oo kale duro / shubay centrifugal / machining CNC
1. Wuu ilaalin karaa dusha saxanka birta.
2 Khafiif ah oo fudud in la beddelo. Waxaan yareynay cilmiga farsamada iyo farsamo yaqaanada khibrada leh si aan u taageerno xirfadleyda loo habeeyay dhamaan noocyada culeyska si loo buuxiyo shuruudaha kala duwan.
Hordhac: Qalabka Nylon waxaa lagu yaqaan xooggooda sare, qallafsanaantiisu sarrayso, la qabsiga wanaagsan, qulqulka hooseeya, xirashada caabbinta iyo xasilloonida kiimikada wanaagsan. Marka lagu daro astaamaha astaamaha nayloon ee caadiga ah, NY nylon wuxuu leeyahay culeys molikal sare iyo kristantalin sare. Sidaa darteed, awoodda astaamaha jirka iyo farsamada ayaa 1.5 jeer ka sarreeya tan ay ku jirto naylonka caadiga ah, awoodda mashiinkuna way sarreeysaa. Waxaa lagu dabaqi karaa mashiinno waaweyn. Waxay u adkeysataa xirashada iyo isku-saliideynta. Nolosha wareegga MC nylon waxay 4-5 jeer ka sarreeysaa tan birta, birta iyo wareegga. Adigoon waxyeello u geysanin maaddada isu geynta, sameynta wiishka wiishka, nolosha xirnaanta iska caabinta ee xarigga siligga waxaa lagu kordhin karaa 10 jeer; kala duwanaanta heerkulka la qabsiga waxaa loo isticmaali karaa inta u dhexeysa -40 ℃ -100 ℃ 5. Waxay qaadan kartaa gariirka, ma soo saari karto qeylo, si habsami leh ayey u socotaa, waxayna leedahay astaamo is-bakhtiin ah. , Ammaan in la isticmaalo
MC nylon ayaa hada ah sheyga ugufiican ee lagu badalo dahabka aan birta ahayn. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa mashiinada injineernimada, korantada, batroolka, macdanta, dhuxusha, birta, sameynta waraaqaha, dhismaha, dekedaha, xargaha iyo wershadaha kale si loo sameeyo wicitaano, sliders, geerka dixiriga ah, gears, iyo garbaha. Qeybo kala duwan sida bushkuleeti giraangiraha, duurka qaata, durbaanada, kuraasta waalka, siddoyinka taageerada, saxarada shiida, kuwa lacagta lagu shubo, biraha birta aasaaska u ah sheybaarada waaweyn.
Kartida Bixinta: Eeg miisaanka wax iibsiga
Hore: Ml nylon slider-noloshiisu waa tayo sare oo waara
Xiga: tayo sare leh Nylon slider ee nooca mashiinada dhismaha